Funda indlela yokurhweba ngezabelo njengePro | Isikhokelo esipheleleyo sikaJanuwari 2022
Funda ukuba ungarhweba njani ngeSabelo ngo-2021 - Isikhokelo sabaQala esiPheleleyo!
Ngaba ujonge ukufunda ukuthengisa izabelo? Ukuba kunjalo, akuqhelekanga ukuba uzive ukhathazekile malunga neemarike zezemali. Kwabangaqhelwanga, ubuninzi bolwazi lulodwa lwanele ukuguqula umrhwebi we-newbie.
Ngale nto ithethwayo, nje ukuba ufunde ukuba ii-ins kunye nokuphuma kweshishini lokwabelana kusebenza njani, ayizukuthatha thuba lide ngaphambi kokuba uqaphele ukuba izibonelelo zilungile. Ngamanye amagama-ngolwazi oluchanekileyo, ukutyala imali kwizabelo akufuneki kudideke kwaphela.
Kwesi sikhokelo sokugqibela, sichaza yonke into ekufuneka siyazi ukuze ufunde indlela yokuthengisa izabelo ngexesha elikhawulezayo!
Izitokhwe zezokhuseleko ezibonisa ubunini benkampani. Ezi zithengwa ngohlobo lwezabelo. Xa inkampani iye esidlangalaleni, izabelo zenkampani zenziwa zifumaneke ukuze zithengwe. Nabani na angazithenga ezi zabelo, ngaloo ndlela abe nesabelo kwinkampani.
Iinkampani zinokuya esidlangalaleni ngezizathu ezininzi. Isenokuba sisidingo sokunyusa imali okanye ukubonelela abo bachaphazelekayo ngenzuzo okanye njengecebo lokuphuma ekugqibeleni.
Yintoni ukuRhweba ngeZabelo?
Kwinkcazo yayo, ukutyala imali kuthetha ukubeka imali kwipropathi, kwisikimu sezemali, okanye kwishishini elinethemba lokufumana imbuyekezo elandelayo.
Ngale nto ithethwayo, isabelo 'sokutyala imali' kunye nesabelo 'sokurhweba' sahlukile.
Xa u tyala imali kwisitokhwe, ujonge ukuthenga izabelo zenkampani ngethemba lokuzibamba kangangexesha elide. Ngexesha apho, uya kuba nethemba lokuqokelela izabelo, kwaye ukuba yonke into ihamba kakuhle, uya kuthengisa izabelo ngenzuzo. Ukuba unethemba lokufumana imali ngokutyala ngale ndlela, ukubheja kwakho okufanelekileyo kukusebenzisa umthengisi wesitokhwe wemveli.
Kwelinye icala, yabelana urhwebo Kukuthengwa nokuthengiswa kwamasheya eenkampani ezithile. Oku kwenziwa okwexeshana elifutshane. Umzekelo, masithi uziva uqinisekile ukuba izabelo ze-Facebook ziya kunyuka ngexabiso.
Okanye kwi-jargon's jargon, uziva "uphakamisa" malunga ne-Facebook. Ugqiba ekubeni uthenge i-Facebook ezixabisa i-1,000 ze-stock ze-Facebook kwaye uzithengise iiyure ezimbalwa okanye iintsuku kamva ukwenza inzuzo nge-2%.
Ngenye indlela, ukuba ucinga ukuba izabelo ziya kuncipha okanye zikhangeleke "zi-bearish," ngoko unquma ukuthengisa okufutshane kwisitokisi. Eli lelona candelo libalulekileyo kurhwebo ngezabelo, olwenza ukuba ufumane inzuzo ukuba ucinga ukuba ixabiso lenkampani liza kuhla.
Funda ngokuThengisa ngokuRhweba- kusebenza njani?
Ezi ndlela zimbini zokufumana imali ngokuthengisa izabelo zihamba ngolu hlobo:
Ukurhweba ixesha elide ngokuthengisa isabelo ngexabiso eliphezulu kunokuba ubusithengele
Urhwebo olufutshane ngokuthenga isabelo ngexabiso eliphantsi kunokuba ubathengisile
Ukuze ufunde ukurhweba ngesabelo, kufuneka kuqala ube nokuqonda kakuhle kwezi ndlela zimbini.
Ukurhweba ixesha elide kwezabelo
Ngendlela elula, ukurhweba ixesha elide kwesabelo kuthetha ukuba uthenga ii-equities ezilindele ukonyuka kwexabiso. Ayifani kangako notyalo-mali kwisitokhwe, njengoko unethemba lokuthengisa izabelo ngexabiso eliphezulu.
Uziva unyanzelekile kwizabelo ze-XYZ, ke uyaqhubeka nokubeka i "oda" yokuthenga kunye nomrhwebi wakho.
Uthenga izabelo ezili-1,000 ze-XYZ kwi- $ 10, ngexabiso le- $ 10,000
Kwiintsuku ezimbalwa kamva, izabelo ze-XYZ zixabiso lentengo kwi- $ 10.50
Emva koko ubeke i "oda" yokuthengisa kunye nomrhwebi kwaye uthengise nge- $ 10,500
Inzuzo yakho yomnatha iyi- $ 500 thabatha iikhomishini.
Xa uhamba ixesha elide, inzuzo yakho inokunyuka ngokungapheliyo, ke kwithiyori, iodolo yakho inokunyuka iye kulo naliphi na ixabiso. Nangona kunjalo, abathengisi bemini bakhetha ukuphuma kwizikhundla zabo kwimizuzu okanye iiyure-ngombono wokwenza inzuzo encinci.
Kwiphepha le-flip, ukuba izabelo ziyehla ngevolumu, uya kuba ujongene nelahleko.
Kananjalo, abathengisi bezabelo basebenzela ukugcina umngcipheko kunye neenzuzo ziphantsi kolawulo oluqinileyo, ngokunyanzelisa inzuzo kwiintshukumo ezininzi ezincinci ukunqanda ukuhla kwexabiso.
Ukurhweba okufutshane kwizabelo
Ukuhamba kancinci kwisabelo kuhlala kudida kubathengisi abaninzi njengoko umbono kukuba kufuneka uqale uthenge izabelo ukuzithengisa. Abarhwebi abafutshane bayayiqonda inzuzo ukuba banokuthenga isabelo ngexabiso eliphantsi kunokuba bebethengisile. Kwiimarike zezemali, ungathengisa emva koko uthenge kwakhona.
Jonga lo mzekelo ukuze ufunde ukurhweba izabelo 'ngokufutshane'.
Ukuba uziva u-bearish malunga nezabelo ze-XYZ, ubeka "ukuthengisa" kwi-odolo kumthengisi wakho.
Ukuba isabelo sixabiswa kwi- $ 10 kwaye uthengisa izabelo ezili-1,000 10,000, 'ufumana' i-XNUMX yeedola.
Nangona kunjalo, ayisiyiyo imali yakho okwangoku. Endaweni yoko, iakhawunti yakho iya kubonisa ngoku ukuba unezabelo ezili-1,000 1,000. Ude uthenge ezi zabelo zili-XNUMX XNUMX, ngekhe wazi ukuba unenzuzo okanye ulahlekelwe kolu rhwebo.
Ukuba ixabiso lesabelo liyehla laya kwi-9.50 yeedola, ubeke i "oda" yokuthenga kunye nomrhwebi wakho.
Uya kuhlawula i-9,500 yeedola kwezo zabelo zili-1,000 500. Oku kukuzisela inzuzo ye- $ XNUMX thabatha iikhomishini.
Ngokubanzi, ukuya kufutshane kwintengiso zentengiso, umrhwebi wakho kufuneka aboleke ii-equity kumntu ongumnini wazo. Ukuba umrhwebi akakwazi ukufumana inani elifunekayo lezabelo egameni lakho, ngekhe ukwazi ukuhamba mfutshane.
Ngezi zizathu, abathengisi bemveli bemveli abavumeli ukuthengisa okufutshane. Kungenxa yoko le nto amaqonga ezorhwebo ezabelo zeCFD aziwa kakhulu kubathengisi bemini njengoko bebonelela ngokuguquguquka kokuhamba kancinci xa ucofa iqhosha.
Zeziphi izitokhwe onokuzithengisa?
Ukuba uthengisa kwi-Intanethi, ezona ndawo zibalaseleyo zokurhweba namhlanje zikunika ukufikelela kumawakawaka ezabelo. Oku kunceda ukuba wenze ipotifoliyo eyahlukeneyo yesitokhwe seCFDs.
Apha sinoluhlu lwezona ndawo zidumileyo zotshintshiselwano ngesitokhwe abathengisi bathanda ukujolisa kuzo.
Njengolunye lotshintshiselwano lwesitokhwe emhlabeni, phantse wonke umrhwebi okwi-Intanethi uya kukunika ukufikelela okungathintelwanga kwi-NYSE. Uya kufumana ezona nkampani zinkulu ze-chip-blue ezithengisa kuyo, kubandakanya iDisney, iFord Motors, iJP Morgan, kunye nokunye.
I-NASDAQ ikakhulu igubungela iinkampani eziphambili zeetekhnoloji zehlabathi kwimigca yeApple, Facebook, Netflix, Microsoft kunye nabanye.
I-LSE ibamba zonke iinkampani eziphambili ezise-UK. Ukuba ungathanda ukufumana ukubonwa kuqoqosho lwase-UK, i-LSE inezinto ezithandwa yiBritish American Tobacco, Barclays, HSBC, BP, nokunye. I-FTSE 100 lolunye ukhetho oluthandwayo kwimakethi yase-UK, njengoko le sisalathiso esigubungela i-100 yeefemu ezinkulu ezidweliswe kwi-LSE.
I-TSE ikunika ukubonwa kuqoqosho lwaseAsia- kunye nabadlali abakhulu abanjengoMitsubishi, iToyota, iNIPPON, kunye neSoftBank.
Phambi kokuba siqhubele phambili, kubalulekile kuthi ukuba sixoxe ngegama eliphambili oya kuthi uqonde ngalo ukuze ufunde ngokurhweba ngokufanelekileyo - iiCFD.
Ikhontrakthi yomahluko (CFD) sisixhobo esivela kurhwebo esivumela abathengisi ukuba bacinge ngokunyuka okanye ukwehla kwamaxabiso esitokhwe. Xa uthengisa nge-CFDs, awuyiyo eyakho isitokhwe osithengisayo. Ngokwahlukileyo, ii-CFDs zikuvumela ukuba uqikelele kwicala elizayo lesitokhwe.
Kwicala elisezantsi, awuyi kubanamalungelo okugcina impahla, oko kuthetha ukuba awuzukufumana zibonelelo. Endaweni yokuba uza kufumana imali kwiinzuzo ezinkulu ozenzayo ngokuthengisa okanye ngokuthenga istokhwe ngexabiso eliphezulu okanye eliphantsi kunelo ulihlawulayo.
Yabelana ngeNtengiso kunye noNcedo
Ukuxhamla yindlela yokurhweba abanokuyisebenzisa ekunyuseni ukubonakaliswa kweemarike zabo ngokuhlawula ngaphantsi kwexabiso elipheleleyo lesitokhwe. Ngamanye amagama, icandelo lomyalelo wakho wezorhwebo liqhutywa kwikhredithi.
Umzekelo, masithi ufuna ukutyala imali eyi- $ 10,000 kwisitokhwe, kodwa uneedola ezingama-5,000 2 kuphela kwiakhawunti yakho yorhwebo. Ngokusebenzisa amandla, ungathenga kumda we-1: 20,000, ekunike i-XNUMX yeedola ukuze utyale. Nangona kunjalo, kuya kufuneka wenze idiphozithi yokuqala okanye uhlawule umrhwebi wakho ukuze athenge kumda.
Makhe sijonge ukuba ingaba ukurhweba kwempahla ephucukileyo kunokubonakala kanjani.
Uya kwi-stock ye-XYZ, ke ugqiba kwelokuba uhambe 'ixesha elide'
Ixabiso lokwabelana ngoku leXYZ yi- $ 30.50
Une- £ 100 kuphela kwiakhawunti yakho yorhwebo, kodwa ufuna ukurhweba nangaphezulu.
Usebenzisa iapile ye5: 1, oko kuthetha ukuba ungathenga izitokhwe zeXYZ kwixabiso le- $ 500
Kwiintsuku ezimbalwa kamva, i-XYZ inyuka yaya kuthi ga kwi-35.50 ye- £ (inzuzo ye-16.3%)
Ubeka iodolo yokuthengisa ukuze wenze imali kwiinzuzo zakho
Kule meko, ngewenze i-16.3% yenzuzo yakho kwisibonda se- £ 100- esisebenza nge- £ 16.30. Kodwa, okoko ubuyisele ku-5: 1, eyona nzuzo yakho iya kuba yi- £ 16.3 x 5 = £ 81.5.
Ukuba ixabiso lesitokhwe alinyukanga ngexabiso, ubuya kuphulukana nemali. Njengoko ubungakanani bonyuso lwakho lonyuka, ezi lahleko ziyandiswa ngakumbi.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngeentsuku zakho zokuqala zokuthengisa, unokungenzi mali. Endaweni yoko, unokugqibela ngokuphulukana nelahleko. Kananjalo, kubalulekile ukuba uqonde intsingiselo xa ufunda ukurhweba ngesabelo ngokusebenzisa amandla.
Funda kuThengiso lwaMashishini-ii-Ordrali zeNtengiso
Urhwebo ngalunye olufakayo luya kufuna iiodolo ezimbini ezizodwa, enye iya kuvulwa kwaye enye ivalwe.
Xa uthengisa ixesha elide, uvula nge-oda yokuthenga kwaye uvale ngokuthengisa.
Kuthengiso olufutshane, uqala nge-odolo yokuthengisa kwaye uvale nge-oda yokuthenga.
Nje ukuba uyazi ukuba yeyiphi indlela oza kuyithatha yosuku, kukho ezinye iintlobo zeodolo ekufuneka uzenzile.
Umyalelo weNtengiso / weMida
Ukuba ukhetha i-odolo yentengiso, ke oku kuthetha ukuba uzimisele ukwamkela ixabiso elilandelayo elikhoyo lesitokhwe ekuthethwa ngaso. Nje ukuba i-odolo ibekwe, iqonga lokurhweba liya kwenza urhwebo ngokulula.
Kwelinye icala, i-odolo yomda ifuna ukuba uchaze elona xabiso kanye umrhwebi kufuneka enze urhwebo lwakho kulo. Xa ukhetha oku, kuhlala kukho ithuba lokuba eli xabiso aliyi kuthelekiswa. Kodwa, iya kukunika ithuba lokungena okanye ukushiya intengiso ngexabiso oligqibayo.
I-odolo yokumisa ilahleko iya kukuvumela ukuba uphume kurhwebo lwakho lwesitokhwe ngexabiso elichaziweyo- xa ubomvu.
Xa uhamba ixesha elide, ukuthengisa-ukuyeka ii-odolo kubangelwa yimarike ukuba ixabiso liwela ngaphantsi kwenqanaba elithile. Oku kusebenza kwingcinga yokuba ukuba amaxabiso ehla kule ntengo yokuthengisa, inokuhla kuphela ukuqhubekeka.
Umzekelo, ukuba ufuna ukuphuma kwindawo yakho xa wehle nge-3%, i-stop-loss order iya kwenza oku egameni lakho.
Ke ilahleko ithathwa ngokuthengisa kwixabiso lokuthengisa. Ngenye indlela, ii-odolo zokuthenga zikhusela izikhundla ezimfutshane kwaye ziya kubangela ukuba amaxabiso aphakame ngaphezulu kwelo nqanaba.
Kuyafaneleka kwakhona ukuqaphela imeko yokuba i-odolo yelahleko yokumisa ayizukuhambelana. Kwimeko apho, unokufuna i-odolo 'eqinisekisiweyo' yokumisa ilahleko. Kuya kufuneka uhlawule ngaphezulu sasaza, Kodwa umrhwebi uya kuqinisekisa ukuba ixabiso lokulahleka kokuyeka liya kubangelwa kungakhathaliseki ukuba yintoni indawo yemarike.
Umyalelo wokuthabatha inzuzo ngowona myalelo ochanekileyo wokumisa ukulahleka. Kwimeko efanelekileyo, unokuba nethemba lokuba ixabiso liya kuqhubeka nokunyuka okanye ukwehla endaweni yakho. Kodwa kusoloko kukho ithuba lokuba ingabhukuqa nangaliphi na ixesha. Unoko engqondweni, kungcono ke ukuzivalela ngaphakathi xa ixabiso lidibana nenjongo ekujolise kuyo.
Nje ukuba ixabiso lifike kwithagethi, urhwebo lwakho luya kuvala ngokuzenzekelayo.
Yabelana ngeNtlawulo yokuRhweba
Ngelixa ufunda ukurhweba ngezabelo, kulula ukungahoyi iifizi kunye neekhomishini oya kuthi uzihlawule kumrhwebi omkhethileyo. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba wazi ukuba uhlawula malini njengoko inokutya kwimbuyekezo yakho yotyalo-mali.
Apha ngezantsi sidwelisa ezinye zeefizi eziqhelekileyo ekufuneka uzijongile.
Igama elithi 'umrhumo ongeyorhwebo' usebenza kwiintlawulo ozihlawula kumrhwebi ezingahambelani nokuthenga kunye nokuthengisa iiasethi. Olu luhlu luvela kwimirhumo yedipozithi, iifizi zokurhoxisa, kunye nemirhumo yeakhawunti.
Phakathi koku, unokufuna ukwenza inqaku lomrhumo wokungasebenzi, ohlawuliswa ngumrhwebi ukuba iakhawunti yakho yokurhweba isabelo ihlala ingasebenzi iinyanga ezimbalwa.
Yabelana ngeeKomishini zoRhwebo
Uninzi lwamaqonga ezorhwebo ezabelo ziya kukuhlawulisa ipesenti yenani lorhwebo lwakho. Umzekelo, ukuba umrhwebi uhlawulisa ikhomishini ye-0.6% kwaye uthenga amasheya nge- £ 1,000, uya kuhlawuliswa i- £ 6 njengomrhumo.
Khumbula ukuba kuya kufuneka uhlawule ikhomishini ngokuthengisa kunye nokuthenga. Oko kukuthi, ukuba uthengisa isitokhwe esifanayo kumzekelo ongentla ngenzuzo ye- $ 1,500, ikhomishini oyibhatalayo iya kuba yi- £ 9.
Kwimarike yemasheya, ukusasazeka ngumahluko phakathi kokuthenga kunye nexabiso lokuthengisa elicatshulwe kwisitokhwe. Ukuba elona xabiso liphantsi lokubuza (thenga) isabelo sesitokhwe se-XYZ yi- $ 10, kwaye elona xabiso liphezulu lokubhida (thengisa) yi- $ 9.50, ukusasazeka kwe-XYZ yi- $ 0.5.
Oku kuthetha ukuba umahluko phakathi kwamaxabiso amabini yi-5%. Kuya kufuneka wenze inzuzo ubuncinci i-5% ukuze uphule nakolu rhwebo.
Ukuzekelisa oku - masithi uthenge izabelo ze-XYZ kwi-10 yeedola kwisitokhwe ngasinye
Utshintsho lwequbuliso lwentliziyo, ke uthatha isigqibo sokuthengisa izitokhwe kwangoko.
Nangona kunjalo, awungekhe uthengise isitokhwe ngexabiso olithengileyo, kodwa nge $ 9.50.
Oku kuthetha ukuba ulahlekile nge-5%. Uya kuphuka kuphela nokuba ubunokuthengisa nge-10 yeedola uqobo.
Kungenxa yoko le nto kufuneka ukhethe iqonga lezorhwebo elibonelela ngokusasazeka okuncinci. Okanye, inzuzo yakho ihlala igqitywa ngumsantsa wamaxabiso.
Funda ukuRhweba ngeZabelo namhlanje
Akunzima ukufunda ukurhweba ngezabelo kwi-Intanethi, kodwa kuthatha ixesha ukwenza inzuzo engaguqukiyo. Ukuba ulindele ukwenza inzuzo kanye ukusuka ekuhambeni, unokuphoxeka. Endaweni yoko, bonke abarhwebi abatsha (kunye nabonisiweyo) baya kudibana nelahleko.
Kulungiselelwe abo bangena njengesiqalo esipheleleyo se- yorhwebo ntengiso amaqonga, nantsi inyathelo ngamanyathelo esisikhokelo onokuthi usilandele.
1. Fumana iSiza soRhwebo
Ukuze uthengise izabelo kwi-Intanethi, uyakufuna kuqala iakhawunti yomrhwebi. Ukukhangela okukhawulezayo kwi-intanethi kuya kubonisa amakhulu wabarhwebi abakwi-Intanethi kunye neearhente ezifuna ishishini lakho. Nangona kunjalo, le mininzi yezinto onokukhetha kuzo inokudideka.
Ngokujonga nje, bonke banokubonakala ngathi banikezela ngeempawu ezifanayo kunye nezixhobo, yiyo loo nto kufuneka wenze umsebenzi wesikolo ngaphambi kokukhetha indawo yakho yokuthengisa. Qwalasela uphononongo lwe-Intanethi kunye nezinto ezinje ngokufikelela kwiimarike zamasheya zamanye amazwe kunye nolwakhiwo lwemali
Ukwenza izinto zibe lula, sifake uluhlu lwezinye zezona ndawo zibalaseleyo zokurhweba ekupheleni kwesikhokelo.
2. Vula iAkhawunti
Nje ukuba ukhethe indawo efanelekileyo yokuthengisa kunye neemfuno zakho, kuya kufuneka uvule iakhawunti. Uya kudinga ukubonelela ngeenkcukacha zakho kwaye ukhethe igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Njengalo naliphi na elinye iziko lezemali, kuya kufuneka ukuba uqinisekise isazisi sakho ngokufaka ikopi yesazisi esikhutshwe ngurhulumente.
Ukwabelana ngeendawo zokurhweba kufuna ukuba ube nemali kwiakhawunti kunokuba uthumele imali kuyo yonke intengiso. Abarhwebi kufuneka babe nokufikelela kwangoko kwimali yakho ukwenza ukuthengiselana njengoko amaxabiso esitokhwe atshintsha kwisibini-nge-yesibini.
Nangona ukhetho lokuhlawula kwindawo nganye yokurhweba luya kwahluka, oku kunokubandakanya amakhadi etyala okanye amakhadi etyala, ucingo lwebhanki / ugqithiso, okanye ii-wallet ezifana nePaypal, iSkrill kunye neNeteller.
4. Thatha isigqibo sokuba ufuna ukuTyala kangakanani
Kubaqalayo, owona mbuzo ubaluleke kakhulu kukuba yimalini oyifunayo ukuqala ukutyala imali okanye ukurhweba. Akukho mda ekubeni ungatyala malini-kodwa, kunokuba kufanelekile ukuqala kancinci.
Ngale nto ithethwayo, uya kuthi ubuncinci ubenesidingo sokuqinisekisa ukuba uyakwazi ukuhlangabezana nobungakanani obuphantsi bezorhwebo.
5. Faka i-ODA
Nje ukuba ubeke iodolo yakho, akukho kubuya mva. Zilinganise iingongoma esele sithethe ngazo ngasentla kwaye uthathe isigqibo esifanelekileyo ngaphambi kokuba ungene
Isishwankathelo, uya kuba ulandela la manyathelo.
Khetha isitokhwe ofuna ukusithenga okanye ukusithengisa
Misela ubungakanani borhwebo lwakho kwaye ufake imali
Khetha ukusuka kumda okanye kwi-odolo yentengiso
Ukuba usebenzisa amandla, khetha iifayile zakho ezininzi
Faka indawo yokuma kwelahleko ukunciphisa iilahleko zakho
Ngenisa indawo yokuthatha inzuzo ukuze ungene ngaphakathi kwiinzuzo zakho.
Nje ukuba ubeke iodolo yakho, iqonga lokuthengisa ngesabelo kufuneka liphumeze kwimizuzwana.
6.Vala isikhundla sakho
Ukuba ulungelelanise i-stop-loss okanye i-order-order order, ukuvalwa kwesithuba kuya kwenzeka ngokufanelekileyo. Ngaphandle koko, kuya kufuneka uvale urhwebo lwakho ngesandla. Kuya kufuneka ubeke ukuthengisa okanye ukuthenga iodolo ukuphuma kurhwebo lwakho. Xa eli nyathelo ligqityiwe, uya kufumana nayiphi na inzuzo oyifumene kwibhalansi yeakhawunti yakho yorhwebo.
Ukukhetha iQonga lokuThengisa eliLungileyo
Omnye wemiceli mngeni yabaqalayo kukufumana iqonga lokuthengisa elithembakeleyo lokubeka ukhetho lwabo kurhwebo. Sincoma ukuba uqwalasele la manqaku alandelayo ngaphambi kokuthatha isigqibo sokuba yeyiphi indawo yokuthengisa oza kujoyina.
1. Ngaba isiza silawulwa?
Ngaphambi kokuba uhambe kwiimpawu kunye nolwakhiwo lwemirhumo, into yokuqala yokuqinisekisa kukuba iqonga lokuthengisa lilawulwa. Bonke abathengisi kufuneka babambe iphepha-mvume kumaqumrhu alawulayo anje ngeCAA kunye neASIC. Awufuni ukujoyina indawo yomthengisi engalawulwayo, nokuba ziluncedo kangakanani na izinto zabo. Ngaphandle koko ubeka imali yakho emngciphekweni.
2. Zeziphi iindlela zokuhlawula ezikhoyo?
Kuya kufuneka uqiniseke ukuba indawo ikuvumela ukuba udlulisele imali ngendlela oyithandayo. Kuya kuba kuhle nokuba ngaphezulu kokukhetha okunokwenzeka.
Abatyalomali abaninzi bajonge iindlela zokuhlawula amakhadi asebhankini kuba iya kubavumela ukuba bafake kwaye bakhuphe imali kwangoko. Nangona kunjalo, xa usenza oku, kuya kufuneka uthathele ingqalelo umda wotshintsho ngalunye.
3. IiKhomishini kunye nokusasazeka
Njengoko sele sigubungele, kufuneka ufunde ukusasazeka kunye neekhomishini oza kuzibhatala kwindawo yentengiso. Ngokufanelekileyo, uya kwiikomishini ezisezantsi kunye nokusasazeka okuqinileyo.
Yenza uphando oluninzi kwindawo yakho oyikhethileyo yokuthengisa kwaye uthelekise ikhomishini yayo ngaphambi kokuba ubhalise.
4. Linganisa Imida
Nokuba ukhetha ukungawusebenzisi umyinge xa ​​uqala kwindawo yokuthengisa, kwixesha elizayo unokufuna olu khetho. Kananjalo, qinisekisa ukuba umrhwebi wakho uyalixhasa eli lungelo kwasekuqaleni.
Ngokusekwe kwindawo okuyo, kuya kubakho umda kwimali yesibonelelo esinokubonelelwa ngumrhwebi. Umzekelo, i-UK kunye ne-EU zineziqendu ezibanjiswe kwi-5: 1 kwizabelo. Kwelinye icala, amanye amazwe awanamida kwaphela.
5. Zeziphi izibonelelo abazibonelelayo?
Yonke intshukumo enye kwintengiso yesabelo ibalwa. Udinga zonke izixhobo ezifanelekileyo zophando ukufikelela kwisigqibo ngasinye. Ukuba ufuna ukwenza uhlalutyo lobugcisa, iindawo ezininzi zokurhweba zikwabonelela ngezixhobo eziphambili zokufunda kwitshathi.
Kubalulekile ngokulinganayo ukuba ube nokufikelela kwiziseko kwaye iingcebiso zokuthengisa. Khetha ifayile ye- urhwebo lwesitokhwe indawo enokuthi ibonelele ngazo zombini, kunye nohlaziyo lwexesha langempela.
6. Zeziphi iimarike zesiko ezikhoyo?
Ukuba sele ukhethe isitokhwe ofuna ukutyala imali kuso, kuya kufuneka ufumane indawo enikezela ngotshintshiselwano oluthile oludwelisiweyo. Ngapha koko, ayilo lonke iqonga lokurhweba elikunika ukufikelela kwiimarike zamanye amazwe- ke qiniseka ukuba uyayijonga le nto ngaphambi kokuba ubhalise.
7. Amaxesha okurhoxa
Abarhwebi abaninzi badla ngokungayihoyi imigaqo-nkqubo yokurhoxa kwindawo yorhwebo. Ezinye iisayithi zithatha ixesha elininzi ukwenza inkqubo yokurhoxa ngesandla, ngelixa ezinye zisenza ngokuzenzekelayo. Ngokukhetha, ufuna ukusebenza nesiza esinokuqhubekeka nokuhlawula zingadlulanga iiyure ezingama-48 emva kokuba ucele ukurhoxa.
8. Uxhaso lwabathengi
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, ufuna umthengisi onikezela ngenkxaso ebalaseleyo kubathengi. Oku kuthetha ukuxhaswa okungenani nge-24 / 5- njengoko oku kuhambelana neeyure zentengiso yemveli. Namhlanje, iisayithi zinomdla wokubonelela ngenkxaso ngengxoxo ebukhoma okanye nge-imeyile, ebavumela ukuba babonelele kwindawo yentengiso yamanye amazwe.
AmaQonga amaBalaseleyo okuFunda ukuBelana ngeZabelo
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, nolu uluhlu lwethu lwamaqonga aphezulu ezorhwebo ahlangabezana nazo zonke iindlela zokukhetha. Zonke ezihlanu zifanelekile kwabasaqalayo kwaye zinezi zinto zilandelayo:
Ixhasa iindlela ezininzi zokuhlawula
Inika ukusasazeka okuphantsi kunye neekhomishini
Ukubonelela ngenkonzo yabathengi ethembekileyo
Ivumela ukuthengisa okufutshane kunye nokufumana amandla
1. I-AVATrade- 2 x $ 200 yeBhonasi eyamkelekileyo yeSitokhwe
I-AvaTrade yenye yeefemu ezindala zabarhwebi kwi-Intanethi kwisithuba kwaye iyaqhubeka ukubonelela ngenkxaso ethembekileyo kubatyali mali. Inkampani ilawulwa kumanqanaba amathathu e-1 kunye ne-tier-2 yolawulo, iyenza ukuba ibe ngumthengisi okhuselekileyo kunye nomngcipheko ophantsi kwistokhwe, i-forex kunye nezinye iimveliso zeCFD. Inika amaxabiso ahlukeneyo okusasazeka. Nangona uza kufumana uhlalutyo lweemarike kunye neempawu zokuthengisa, awunakufumana izixhobo eziphambili zophando ezikhoyo kwezinye iisayithi zokurhweba eziluluhlu.
Njengoko sityhile ekufundeni kwezorhwebo isikhokelo, ukuba ngumtyali mali otyunjiweyo kungathatha ixesha. Iindaba ezimnandi zezokuba ungazisebenzisa izicwangciso ezisebenzayo kunye nezenziwa, ngokudibanisa isitokhwe utyalo kunye nesabelo urhwebo.
Ngokusesikweni, sigubungele zonke izinto eziyimfuneko ekufuneka uyazi ngokungena kwiimarike zorhwebo ezikwi-Intanethi. Qiniseka nje ukuba indawo yokuthengisa oyikhethayo inikezela yonke into oyifunayo kwaye uqonde ubungozi ngaphambi kokutyala imali.
Ngaba ndizakufumana izabelo ngokuthengisa esitokisini?
Ucinga kwicala elizayo leestokhwe xa usenza 'urhwebo'. Njengoko oku kuncedwa zii-CFDs, awunalungelo lokufumana izabelo.
Kutheni le nto ndifuna ukuqinisekisa iakhawunti yam xa ndirhweba ngesitokhwe kwi-Intanethi?
Iindawo ezilawulwayo zokwabelana ngesabelo ziyafuneka ukuba zithobele imithetho ye-AML, oko kuthetha ukuba kufuneka baqinisekise isazisi sakho esikhutshwe ngurhulumente.
Lithini elona xabiso lincinci lokutyala imali kwindawo yokuthengisa?
Inani elincinci lixhomekeke kwindawo ethile yokuthengisa.
Yeyiphi imirhumo ebandakanyekayo kuthengiso lwesitokhwe?
Abarhwebi babiza iifizi ezahlukeneyo, kubandakanya iikhomishini, ukusasazeka, iifizi zemali, kunye neefizi ezingezizo zokurhweba.
Ngaba ukurhweba ngamasheya anokubakho kunokwenzeka?
Zonke iindawo zokurhweba zeCFD zikuvumela ukuba uthengise izabelo kunye nomgangatho. Nangona kunjalo, imida yokunyusa iya kugqitywa yindawo yakho kunye nenqanaba lakho lokurhweba (oqeqeshiweyo okanye umthengi wentengiso).
Ukuba ucinga ukuba ixabiso lesitokhwe kufuneka lihle, qala ngokubeka i-odolo yokuthengisa kunye nomrhwebi wakho, Nje ukuba ubenenzuzo, vala urhwebo lwakho ngokubeka i-oda yokuthenga.
Zeziphi iindlela zokuhlawula ezikhoyo zokufaka kunye nokukhupha imali kwindawo yokuthengisa?
Iindlela zokuhlawula ziyahluka ukusuka kwindawo enye yokurhweba ukuya kwenye. Ngokubanzi, unokufumana iindlela zokusebenzisa i-debit / amakhadi etyala, ii-akhawunti zebhanki, okanye ii-e-wallets. .